CANADA: Wasiir Isku Casiley Arin La Xiriirta Pizza
Tarjumadii SomaliTalk.com | Jimce, Jan 14, 2005
Toronto, Canada: Wasiiradii Socdaalka [Citizenship & Immigration] ee Canada oo magaceeda la yiraahdo Judy Sgro ayaa maanta oo Jimce ah is casishey kaddib markii uu nin leh meel Pizza-da lagu gado ku soo eedeeyey in markii ay doorashada ku jirtey ay u ballan qaaday in ay ka caawin doonto arimo la xiriira degganaanshaha dalka Cannada asaguna uu Pizza bilaash ah sidaas ku siiyey dadkii ayada u ololaynayey.
Ra'iisul wasaaraha Canada, Paul Martin, ayaa isla maanta Aqbalay is casilaadaas, tan oo ahayd wasiirkii ugu horeeyey ee dawladiisa iska casila ilaa 2003 oo uu ra'iisul wasaare noqday. Jagadaas bannaanaatayna waxaa markiiba loo magcaabay wasiir cusub oo magaciisa la yiraahdo Joe Volpe.
Ra'iisul wasaaraha Canada
Ninka dacwada wasiirka ku furay oo magaciisa la yiraahdo Harjit Singh, oo dukaan lagu gado Pizza ku leeyahay Brampton, Ontaria, waxa uu sheegay in uu Pizza ku gacan qabtay doorshadii wasiirada, taas oo uu sheegay bedelkeeda in ay wasiiradu u ballan qaaday in ay ka gacan qabaneyso deganaasnsho ka helida Canada, arintaas oo ay Judy Sgro si waadax ah u beenisey kuna tilmaantay wax aan caqliga gelayn.
Harjit Singh waxa uu dacwada ka furay maxkamada dhexe ee Canada ee magaalada Toronto. Waxana uu ku mudacayaa in Sgro ay isaga weydisatey in uu Pizza leh toon siiyo 15 ama 16 qof oo ayada si mutadawacnimo ah ugu ololaynayey xilligii ay ku jirtey tartanka doorashada. Taas oo uu sheegay in uu xaaladiisa u sheegtay ayna hadda ka baxday ballantii ahayd in ay asaga ka caawin doonto arimaha la xiriira laanta socdaalka [Immigrationka] Canada.
Singh waa aabbe leh saddex carruur ah, Canada waxa uu ku sugnaa ilaa 1988. Waxaana qorshaysan in Khamiista soo socota loo tarxiili doono dalkiisii Hindiya.
Wasiirkii hore ee socdaalka
"Pizza ayaan ku bixiyey
Doorshadii wasiirka" Singh
Wasiirada is casishey waxay TV-ga Canada ee CBC u sheegtay inta ay wasiirka tahay in aysan si xor ah isaga difaaci karayn eedaynta ninkaasi u soo jeediyey, ayna jagadaas iska casishey si ay eedynta isaga difaacdo.
Sgro waxay tiri weligay ninkaas lama hadlin, eedayntaasna waxba kama jiraan, umana baahnayn Pizza bilaash ah. Xaafada aniga xafiiskayga tartanka doorshadu ku yaal waa xaafad Talyaani oo ay ku yaalaan makhaayado badan, ayey tiri.
Sgro waa 60-jir ka tirsan xisbiga Liberal-ka Canada, waxaana laga soo doortaa xaafadda York West ee magaalada Toronto.
Dhegeyso Warkii CBC ee is casilaada...
Beelaha qaadacay Golaha Wasiiradda
Baaq ay soo saareen waxgarad ka kamid ah beelaha qaadacay dhismaha golaha wasiiradda ee.. Guji... Jan 13
Qaylo Dhaantii Culimada Iyo Waxgaradka Ee Waxyeeladii Badgariirka
Warbixin iyo sawiro laga soo qaaday Xaafuun.. Guji Jan 13
� Maxkamada USA: Soomaaliya dadka waa loo tarxiili karaa
� Canada: Dhoofintii Nin Soomali ah oo La Baajiyey
� Newzealand oo Laga Waayey Calanka Soomaaliya
�Guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo laga dalbaday in ... [Khamiis]
Nairobi: Shir ay iskugu yimaadeen Xildhibaanada, Aqoonyahanka, Ganacsatada beesha sheeqaal oo Guji... Jan 12
Kismaayo: Warsaafadeed uu soo saaray Jaamac Aadan Dheere oo ah... Guji... Jan 12
Warsaxaafadeed: Free Awdal Forum
Fashilaada Hargaysa: Ummada somaaliyeed waxay u dhuun dalooshaa isbadalada siyaasadeed ee... Guji Jan 12
Warsaxaafadeed: Xisbiga SSUP
Mowqifka siyaasadeed ee ku wajahan Siyaasadda Guud ee Soomaaliya.. Guji.. Jan 12
Warsaxaafadeed: Sultan Hurre Human Rights
Waa in Wax Laga bartaa Khaladaadkii hore.. Guji... Jan 12
Dhambaallo Ku Socda Cadde Muuse
�Digniin iyo shuruudo ku socda General CADE MUSE
�Hambalyo Iyo Bogaadin Hogaanka cusub Ee PL
ka Akhri halkan... Jan 12
Basaas itoobiyaan ah oo lagu qabtay Guriceel
iyo Dagaallo ciidamada gumaysiga itoobiya lagu jabiyay, ka akhri wararkii Radio Xorriyo Jan 11